HGH थाईलैंड फार्मेसी - वृद्धि हार्मोन मा लेख
HGH थाईल्याण्ड द्वारा जनवरी 10, 2018
थाइलैंडमा एचजीएच (सोटोट्रोपिन)
विकास हार्मोन (भोटोट्रोपिन) - थाइल्याण्डमा एथलीटहरू, शरीरबहिनीहरू र अन्य पर्यटकहरूमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय, एक औषधीय एजेन्ट हो। पहिले, एनालिकोटको रूपमा, सोटोट्रोपिन मात्र शरीर सौष्ठव, भारोत्तोलन र माकुरो विकासको सम्बन्धमा अन्य खेलहरूमा प्रयोग गरिएको थियो, अब एथलीटहरू, जिम्मास्टहरू र खेलकुदका प्रतिनिधिहरूले यसलाई बडिबिल्डरहरू भन्दा पनि सक्रिय रूपमा प्रयोग गर्छन्।
Somatotropin चोटहरूको उपचारमा राम्रो सहनशीलता बढाउनको लागि एक राम्रो उपकरण साबित भयो। यसकारण, यस औषधिको दायरा निरन्तर बढ्दै गएको छ। अन्तमा, कुशलतापूर्वक, यो उत्पादन प्रयोग गर्दै, तपाईं एक युवा खेलाडीको विकास बढाउन सक्नुहुन्छ, र यो पनि महत्त्वपूर्ण छ र एक विशिष्ट कुराको योग्य छ।
शरीरलाई भोटेटोट्रिक हार्मोन (HGH) चाहिन्छ किन? सामा अर्थ शरीर। Somatotropic को अर्थ "त्रयी" हो - शरीर को एक आत्मीयता। शरीरको विकासको समयमा, भोटोट्रोपिन मुख्य विकास कारक हो। शरीरको वृद्धिले लम्बाइ र चौडाई दुवैमा प्रत्यक्ष रूपमा यसको मात्रामा निर्भर गर्दछ। शरीरमा सोटोटोट्रोपिन, बढि एक व्यक्ति बढ्छ।
कंकाल को हड्डियों मा कार्टिलैगिनसस वृद्धि विकास क्षेत्र पछि, र लम्बाई को हड्डिहरु को विकास, केहि समय को लागि अझै पनि मोटाई मा हड्डिहरु को वृद्धि हो। कंकाल को केहि भाग मा, वृद्धि क्षेत्र एक व्यक्ति को जीवन भर ossification के अधीन नहीं हैं। विकासको यस्ता क्षेत्रहरू निम्न जाल, नाक, हात र खुट्टामा छन्।
कहिलेकाँही यो यो उमेरको उमेरमा विभिन्न कारणहरूको लागि हुन्छ
विकास हार्मोन को स्राव धेरै बढेको छ। त्यसपछि दिग्गजहरू बढाउनुहोस्, जुन कहिलेकाँही2एम भन्दा माथिको उचाई पुग्छ। यो अवस्था रोग मानिन्छ र यसलाई "कठोरता" भनिन्छ। तथापि, हाम्रो ग्रहमा धेरै मानिसहरू दिग्गज भएनन्, तर केवल उच्च मान्छे। धेरै आमाबाबुले छोराछोरीको विकास बढाउन चाहन्छन्, र अहिले यो सम्भव छ।
वैसे, पृथ्वी मा सबै भन्दा लामो मान्छे रहयो थियो,2एम 48 सेमी (!) को वृद्धि भएको थियो। कहिलेकाहीँ विकास हार्मोनको स्रावले वयस्क शरीरमा नै नाटकीय रूपमा वृद्धि गर्छ, जब विकास क्षेत्रहरूको प्रायः बन्द हुन्छ। यस अवस्थामा, व्यक्तिको निचो जबड़े, नाक, हात र खुट्टाहरू महत्त्वपूर्ण हुँदै जान्छन्। यो अवस्था acromegaly भनिन्छ, अर्थात् शरीर को परिधीय भागहरूमा वृद्धि। एक वयस्क र पूर्णतया गठित शरीरमा, ह्युटोट्रोपिनले anabolic प्रकार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ।
यो अपवाद बिना सबै अंग र ऊतकों मा प्रोटीन संश्लेषण को प्रक्रियाहरु को लागि जिम्मेदार छ। केहि मानिसहरू जान्दछन् कि HGH प्लस सबै केहि पनि एक हार्मोन हो। तनाव अन्तर्गत, रगतमा रक्त ग्लूकोज स्तर तेज हुन्छ, र यसले शरीरलाई अनुचित स्थितिमा अनुकूलन गर्न मद्दत गर्दछ जुन प्रोटीन संश्लेषण बढ्दै गएको छ, मुख्यतः ऊर्जा संरचनाको संरचनामा।
त्यसकारण, सामान्यतया राम्रो बलियो कंकालका साथ बलियो संविधानका व्यक्तिहरू हाम्रा जीवनका सबै प्रकारका तनाव र विकारहरूबाट अझ बढी सहनशील हुन्छन्। उनीहरूले स्टोटप्रोपिन द्वारा यसमा मद्दत गरेका छन्। निम्न जवको विकास क्षेत्रबाट, नाक, हात र खुट्टा कहिल्यै बन्द छैनन् किनकि यी "भागहरू" सारा जीवनमा बढ्छ। तर पुरानो उमेरमा पनि तिनीहरू सानो हो, औसत मा 5-8 मिमी द्वारा।
तथापि, र तिनीहरूका अपवादहरू, सेवानिवृत्तिको उमेरमा एक व्यक्ति, नाकको र मुट्ठी एक प्रभावशाली आकारमा पुग्छ, जसको वरपर मजाकका लागि निरन्तर विषयको रूपमा कार्य गर्दछ। थाइल्याण्डमा ठूला-स्तरका अध्ययनहरूले देखेको छ कि युवावस्थामा वृद्धिको पूर्ण भएपछि, पछिल्लो जीवनको समयमा अझै पनि "थोपा बढ्छ"। तर यो विकास धेरै कम छ। 60 को उमेर सम्म, एक व्यक्ति 8-10 मिमी लामो र एक चौडाई को बारे मा बढ्छ।
तथापि, यो वृद्धि अचम्म छ र मांसपेशिहरु को कमजोरीको कारण अदृश्य छ, जुन अधिकांश उमेरमा यो उमेरमा आउँछ। बचपन मा वृद्धि हार्मोन को कमी संग, मान्छे धेरै सानो बढ्छ, र उनलाई बौने भनिन्छ। चिकित्सकहरु को भाषा मा, यो शर्त "hypophysial nanism" भनिन्छ। सामान्य वृद्धिको वयस्कमा विकास हार्मोनको घाटाको उपस्थितिमा, विभिन्न प्रकारका डस्ट्रोफी विकास हुन्छ, जुन कहिलेकाहीं मृत्युमा पनि अन्त हुन्छ, तर तिनीहरू अत्यन्तै दुर्लभ छन्। आफैमा, "हाइफोफिसियल नैनवाद" नामले पहिले नै थाहा पाएको छ कि somatotropin पिट्यूटरी ग्रंथिमा उत्पादन गरिन्छ।
पिट्यूटरी ग्राउन्ड भनेको के हो भने सबै वा लगभग सबै थाहा छ। पिट्यूटरी ग्रंथि निचो सेब्रोल परिशिष्ट हो, मस्तिष्क को आधार मा अग्लो। पिट्यूटरी ग्रंथिको आकार र आकार चेरी जस्तो छ। पिट्यूटरी ग्रंथि यसको हल्का असुरक्षा को बल मा राम्रो तरिकाले संरक्षित छ।
यो एक मजबूत हड्डी को मामला मा स्थित छ - खोपड़ी को आधार मा "टर्की काठी"। पिट्यूटरी ग्रंथिमा अन्य हार्मोनहरू उत्पादन गरिएका छन् - थाइरोइड-उत्तेजना हार्मोन (थाइरोइड ग्राउन्डलाई असर गर्दछ), एड्रेनो कोर्कोकोटोपिक (एड्रेनियल ग्रंथिहरू सक्रिय गर्दछ), गोनडोट्रोपिक (लिंग ग्राउण्ड्सहरू सक्रिय गर्दछ) र अन्य।
पिट्यूटरी को काम हाइपोथोमस, मिडब्रेन को एक विशेष क्षेत्र द्वारा नियमन गरिन्छ। त्यहाँ, लिबिन र स्टेटिन्सहरू विकसित हुँदैछन्। सोटोट्रोपिकिक हार्मोनको लागि, सोटोटोबेरिन र ह्वाटोस्टेटिन महत्त्वपूर्ण छन्। Somatoliberin हाइपोथोममस पिट्यूट ग्रंथि द्वारा ग्रोथ हार्मोन स्राव बढ्छ। Somatostatin, यसको विपरीत, somatotropin को उत्पादन को रोकथाम। यदि हामी शरीरमा विकास हार्मोनको मात्रा बढाउन चाहन्छौं भने, यो आवश्यक छ कि वाटोथोलिबिनको मात्रा बढाउन वा सोटोस्टेटिनको मात्रा घटाउन आवश्यक छ।
लामो समयको लागी यो विश्वास भएको थियो कि विकास हार्मोन आफैले सक्षमता मांसपेशिहरु ऊतक, कार्टिलेज र आन्तरिक अङ्गहरु मा अभिनय गर्दछ। त्यसपछि त्यसो भएन यो यो छैन। एचजीएचले शारीरिक रूपमा भन्दा 2,000 गुणा बढीको सावधानीमा भिट्रोमा मात्र कोशिकाहरूलाई असर पार्न सक्दछ। एक सामान्य शरीर मा, HGH ले मात्र जिगरमा कार्य गर्दछ।
जिगरले इन्सुलिन-जस्तै विकास कारक उत्पादन गर्छ, जुन स्टोनियो पनि भनिन्छ। Somatomedin - पनि एक anabolic र वृद्धि को प्रभाव छ, लक्षित कक्षहरु लाई प्रभावित। एक चिकित्सकको रूपमा, म प्रायः घटनाहरू देख्छु जब गम्भीर जिगर रोग पछि बच्चा बढ्दै गएको छ र पिट्युटरी न्युमेशमको समान अवस्था हुन्छ, यद्यपि यो रोग somatomedine को कमीको कारण हो।
अर्कोतर्फ, अचानक रक्त मा ग्लूकोज को सामान्य स्तर संग सामान्य छ। यस अवस्थामा रोगको कारण रक्त मा हेटोमेडिन को अत्यधिक स्तर को कारण हुन्छ। सामान्यतया, कंकाल मांसपेशिहरु लाई लागू गरीएको हेटोटोमिक हर्मोन संग anabolism को विनियमन को श्रृंखला मा निम्नानुसार छ:
यदि हामी एनाबोलिक प्रभाव हुन चाहन्छौं भने, मांसपेशी कक्षहरूमा भन्नुहोस्, त्यसपछि हामी यो गर्न सक्छौं:
1। हाइपोथोममस मा somatoliberin को मात्रा बढाउनुहोस्।
2। Somatostatin को मात्रा घटाउनुहोस्।
3। शरीर STG मा प्रवेश गर्नुहोस्।
4। शरीर somatomedin मा परिचय।
यी मध्ये कुनै पनि अवस्थामा, अन्तिम परिणाम प्राप्त गरिनेछ। र तपाईं दुवै भन्दा आवश्यक कारक को परिचय को बाटो मा जान सकिन्छ, र आफैले जीव द्वारा यसको उत्पादन उत्तेजित गर्ने बाटो को साथ। तपाईं अझै बढ्नको बाटोमा जान सक्नुहुन्छ
आवश्यक पोषक तत्वहरूमा कोशिकाहरूको संवेदनशीलता, तर यो कुराकानी अहिलेसम्म आउँदैन। Somatotropin विनियम को पूरी श्रृंखला मा अधिक बारीकी देखि देखो
र Somatotropin संग यो उपचार शुरू। सबै पछि, ऐतिहासिक पहलू मा, यो सबै यसको साथ शुरू भयो। एसटीजी एक पेप्टाइड हार्मोन हो। यसमा 191 अमीनो एसिड अवशिष्टहरु मा एक पर्याप्त लामो श्रृंखला एमीनो एसिड हुन्छ। 1921 को रूपमा प्रारम्भमा, जनावरहरूमा प्रयोगमा फिजियोलोजिस्टहरूले प्रयोगात्मक गर्भनिस्टता उत्पन्न गरेपछि तिनीहरूले बोभिन पिट्युटरी ग्रंथिहरूको पूर्वमा लोबको कच्चा निकायको परिचय दिए। हामी देख्न सक्छौं, जवान जीवनीको विकास बढाउने सम्भावना धेरै समयदेखि नै साबित भएको छ।
पशु मूल को शुद्ध somatotropin को पहिलो 1944, uman - 1956 मा अलग थियो। त्यसपछि पनि, एसएचएचको सहयोगको साथ, निरन्तर राम्रो नतिजाहरू भत्काउन सक्छ र मुख्यसँग व्यवहार गर्न थाले। त्यसपछि, यो फेला पर्यो कि STH को कम्तीमा तीन प्रकारका विभिन्न आणविक भारहरू छन्। मानवहरूमा, एसटीएच पिट्यूटरी ग्रंथिको तथाकथित ईओसिनोफिलिक कोशिकाहरूमा उत्पादन गरिन्छ।
Eosinophilic कोशिकाओं को ट्यूमर, एक नियम के रूप में, gigantism के उन उदाहरणों का विकास जब मानव विकास2मीटर की तुलना में बहुत अधिक है। औषधिको विकासको यस चरणमा यस्ता ट्यूमरहरू सफलतापूर्वक व्यवहारिक र व्यावहारिक रूपमा उपचार गर्दछन्। तथापि, उच्च वृद्धि भएको छ। विश्वव्यापी श्रेणी बास्केटबल खेलाडीहरूमध्ये, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले आफ्ना जवान वर्षमा पिट्यूटरी सर्जरी पर्थ्यो।
ट्यूमर नाक (!) को माध्यमबाट हटाइयो, र व्यक्तिले जीवन बिताउछ, जस्तै कि केही भयो। तथापि, अपरिहार्य घटनाहरू छन्। अर्कोतर्फ, कृत्रिम रूपले "उकालो" खेलाडीहरूको संख्या बढिरहेको छ, जुन उमेरमा विकास वृद्धि हार्मोन संग इंजेक्शन गरिएको थियो।
रगतमा हार्मोन वृद्धिको स्राव पिल्लिएको छ। दिनको समयमा, नियमको रूपमा, 6-9 ठूलो चोटहरू। यस्तो चोटीहरूको संख्या कहिलेकाहीँ 12 पुग्छ। चोटीको उचाई शारीरिक गतिविधि र नींदको समयमा बढ्छ। भोजनमा, ह्युटोट्रोपिनको रिहाईको चोटको उचाइ, यसको विपरीत, कम हुन्छ, खासगरी यदि यो खाना कार्बोहाइड्रेट हो।
सबै स्तनधारियों को एसटीजी एक नै जीवविज्ञान सक्रिय न्यूक्लियस छ। Phylogenetic कम पशु प्रजातियों उच्च GHG मा प्रतिक्रिया, तर कम प्रजातिहरूको एसटीजी उच्च प्रजातिहरूमा कार्य गर्दैन। मानव एसटीजी, उदाहरणका लागि, सबै किसिमका जनावरहरूमा कार्य गर्दछ, तर कुनै पनि स्मीट्रोपिनन जनावरहरू हरेक व्यक्तिले कार्य गर्दछ।
एसटीजी बन्दरहरू प्रायः कम उन्नत उन्नत प्रजातिहरूमा कार्य गर्नेछन्, तर मानिसहरूमा होइन। व्हील को एसटीजी फेरि फेरि कम संगठन को जनावरहरु मा कार्य गर्नेछ, तर न केवल एक मानव वा बंदर आदि मा।